Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Norrbottens län / Boden
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 7 1 2021
4,290 kiilomitir oo laba jibaaran
Luleå 37 kiilomitir
Kalix 80 kiilomitir
Skellefteå 158 kiilomitir
Gudaha Boden hoy'gaada waa ka kireeysan kartaa ama waa ka gadan kartaa. Haddii aad dooneeyso in aad kireeysato waxaan lee nahay shirkad guri oo degmadu lee dahay, oo la dhaho BodenBo. Bogga degmada waxaa ku jiro liiska guri kireeyaha dhamaantood iyo xafiiska dalaalka guriyaha Boden.
Sido kale Boden waa degmo leh qaabilaada qaxootiga cusub oo guri ka helaayo Hey'adda socdaalka.
Boden waxaa ku yaalo urur kasto laga bilaabaa ururada isboortiga ilaa ururada dhaqanka iyo urarada diinta iyo siyaasada. Markii haddii aad dooneeyso in aad xoog saarto ku bada cagta, koox hees, ciyaaraha tagareeynta, ciyaarta shaxda ama wax kale. Ururaada ka hesho waad heli doontaa. Ururada badankood waxaad ka heli kartaa diwaankeena-urureed.
Bartamaha Boden sido kale waxaa ku taalo maktabad iyo dukaamo badan. Sido kale waxaan lee nahay dhowr dukaamo oo gacaan labaad ah oo aad ka gadan karto dhar iyo alaab guri oo rakhiis ah. Bartamaha Boden waxaa ku yaalo dukaanka laanta cas Kupan iyo suuqa dib uu warshadeeynta. In yar oo ka baxsan bartamaha waxaa ku yaalo dukaanka gacan labaadka ee kaniisada bingist.
Sido kale waxaan lee nahay dukaamo cunto, uu ka mid yahay Willys, ICA iyo Coop.
Markii aad weeyn tahay habab badan oo kala duwan ayaad wax uu baran kartaa. Xarunta waxbarashada degmada waxaa ka jiro koorsooyin badan oo loogu tala galay qofka dalka ku cusub. Halkaan waxaad ka dhigan kartaa iswiidhiska loogu tala galay ajnabiga. Sido kale waxaa ka dhigan kartaa waxbarasho ku socoto qofka aan afka iswiidhiska uu san aheeyn afkiisa hooyo.
Sido kale Boden waxaa uu dhow Jaamacada Luleå oo aad ka dhigan karto waxbarasho ka heer sareeyso.
Haddii aad xanuusato oo u baahato caawimaad deg-deg ah habeenkii iyo fasaxyada waa inaad wacdo 1177 si loo helo talo-bixin.
Haddii aad u xanuusato si khatar ah oo u baahato daryeel deg-deg ah, xilli kasta oo maalintii iyo habeenkii ah, waa inaad wacdo 112.
Sido kale Boden waxaa ka jiro basas-xaafadeed. Jadwalka-safarada iyo jidadka ee basaska marayaan waxaad ka heli kartaa bogga gaadiidka-xaafadaha.
In Boden uu jirto 4,2 maayl waxaa ku taalo goobta duulimaadka Luleå. Halkaas waxaad uga duuli kartaa diyaarado ka dhax shaqeeyo Iswiidhan iyo kuwa dibadeedba.
Länstrafiken Norrbotten SJ Norrtåg Gaadiidka dadweynaha ee degmadan Gego diyaaradeed
Shaqo dhiibayaasha madaxabanaan ee gudaha degmada waxaa ugu weeyn Inre kraft oo ka shaqeeyso kalmeeynta gaarka ee shakhsiga.
Haddii aad dooneeyso in aad si gooni ah uu furato shirkad waxaad caawinaad ka heleeysaa xarunta-shirkadeeynta.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Boden